Amisom oo u baahan milateri & boolis Jabuutiyan ah – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Wakiilka Midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya, Mohamed Sallah Annadif ayaa sheegay in Midowga Afrika qorsheyneyso in dalka Soomaaliya la geeyo milateri dheeraad ah oo ka socda Jamhuuriyadda Jabuuti iyo weliba ciidamo boolis ah.
Annadif oo la hadlay BBC ayaa amaany kaalinta ciidamada Jabuuti ka qaateen howlgalka Midowga Afrika ee ka socda Soomaaliya, wuxuuna xusay in sidaas darteed Midowga Afrika keenayo milateri dheeraad ah iyo boolis ka socda dalkaas.
“Waa sax in ciidamada Jabuuti kaalin weyn ka qaateen howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya, maxaa yeelay iyagu waxey ku hadlayaan afka Soomaaliga, waxaana keeni doonaa milateri dheeraad ah iyo boolis ka socda Jabuuti” ayuu yiri Mohamed Sallah Annadif.
Wakiilka Midowga Afirka u qaabilsan Soomaaliya, Mohamed Sallah Annadif ayaa dhanka kale ka hadlay ciidamada AMISOM ee sii joogaya Kismaayo, wuxuuna sheegay iney halkaas joogi doonaan ciidamo ka socda Sierra Leone, Nageria iyo Burundi, aynna hogaanka heyn doonaan ciidamada ka socda dalka Sierra Leone.
Wuxuu sheegay Annadif in ciidamada Kenya intooda badan ka baxyaan Kismaayo, islamarkaan tegayaan deegaano ku dhow xadka Soomaaliya iyo Kenya sida Libio. Arrintaan ayuu sheegay iney soo gebageboobi doonto dhamaadka bishaan June.
Mohamed Sallah Annadif wuxuu ka hadlay caqabado heysta howlgalka Midowga Afrika, wuxuuna xusay in caqabadda koowaad tahay khilaafka u dhaxeeya siyaasiyiinta Soomaalida.
Wuxuu sidoo kale sheegay in inkastoo bilihii tegay Alshabaab laga saaray ilaa 10 degmo in haddana Alshabaab xireen waddoyin badan, islamarkaan joogaan deegaanada ku xeeran degmooyinkii laga saaray.
Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa ciidamadeedu waxey ka howlgalaan gobolka Hiiraan ee bartmaha Soomaaliya, gaar ahaan degmooyinka Beledweyne iyo Buulo Barde.